Musqusha Laba jibbaar oo luqluqday oo Dahab ah
Bogga ugu weyn / accessories / Qalabka Musqusha / WOWOW Hirarka Tuwaalada Dahabka ah ee lagu cadeeyay
La xiriir adeegga macaamiisha si aad u hesho jillaab shukumaan bilaash ah: sales@wowowfaucet.com, hadiyad lacag la'aan ah iyo rar bilaash ah.
musqulaha labajibbaarka musqusha ayaa ku deeqi doona ganacsiga musqusha, qolka badbaadinta, sidoo kale u dhigma qolalka jiifka, jikada, musqusha, iyo qolka dharka lagu dhaqdo, dharka dharka lagu qurxiyo, meelaha raaxada, iyo qubayska.
Suuliyadaha musqusha dahabka ah ee la garaacay 4020301BGD
Waxay ka kooban tahay cillad sare 304 birta birta ah oo hubineysa cimri dherer iyo isku halayn.
Dharka jilicsan ee loo yaqaan 'PVD Zirconium' dhammeystiran oo dahabka ah ma muujiyo wax wasakh ah oo wuxuu u adkeysan karaa nabarrooyinka maalinlaha ah, daryeelka maalin walba waa mid toosan, wuxuu si habsami leh oo quruxsan muuqaalkiisa u ilaaliyaa. Naqshadeynta naqshadeynta casriga ah waxay la xiriirtaa qurxinta guryaha badankood waxayna siisaa qol badan oo lagu laalaado waxyaabaha laga soo galo, meesha dharka lagu dhaqdo, musqusha, iyo qolka jiifka.
Waxyaabaha Qiimaha Wax ku oolka ah - qiimaha saaxiibtinimo ee shey tayo sare leh, xulasho fiican musqusha.
Fudud oo la rakibo, oo kor loogu rakibo qalabka
Hadaad rabto inaad ka iibsato Amazon ama isbarbar dhig qiimayaasha, dhagsii halkan: Double Robe Hooks Gold
SKU: 4020301BGD Categories: accessories, Qalabka Musqusha, Qandaraasyada La Muujiyey Tags: Dahab dahab ah, Darbiga Hooska, Dhagax buuran
WOWOW Ma haysto Warqadaha Musqusha ee loo yaqaan 'Drill Toilet Waraaqda Xajiska' Nickel
WOWOW Nickled Gacanta Nickel Gacanta Dheerta Dheecaan Dheerta ah